ECS Inc. International ဖြန့်ဖြူး | ECS Inc. International အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး - Infinite-Electronic.hk
နေအိမ်လိုင်းကဒ်ECS Inc. International
- 1980 ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, လိမ်လည်မှုများ Inc ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမ္ဘာပေါ်မှာကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်ကုန်များလူသိအများဆုံးနှင့်အတွေ့အကြုံရှိထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာရန်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်ရေးမှ cylindrical tuning လမ်းဆုံလမ်းခွ crystals မီးဖိုထိန်းချုပ်ထားလှို မှစ. , လိမ်လည်မှုများ Inc ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြိမ်ရေထိန်းချုပ်မှု devices များအရှိဆုံးပြည့်စုံလိုင်းတက်ပေးထားပါတယ်။
သည်အခြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်၏လိုက်စားနှင့်အတူချီးမြှင့် ISO9001 / 2000 နှင့် QS-9000 လက်မှတ်တွေလိမ်လည်မှုများ Inc ကိုအားကိုးအကြိမ်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်ကုန်အဘို့သင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ လိမ်လည်မှုများကိုလက်ရှိ TS16949 လျှက်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ QS-9000 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အစားထိုးရန် 2002 မှတ်ပုံတင်ရေး။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာများကျွန်ုပ်တို့၏ 65,000 စတုရန်းပေ, ငါတို့လေးယောက် (4) နိုင်ငံတကာစံ 209. အလိုအလျောက်စံကိုက်ညှိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းသီးတောင့်နှင့်အတူအညီ 10K သန့်ရှင်းတဲ့အခန်းတစ်ခန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာစမ်းသပ်ခန်း, အထီးကျန်အိုမင်းခန်းနှင့်ရှေ့ပြေးပုံစံဓာတ်ခွဲခန်းများကဤအဆောက်အဦးကိုဖြည့်ပါရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုဆက်လက်ဖွင့်အတူ, လိမ်လည်မှုများ Inc ကိုကအားလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့ယနေ့တောင်းဆိုဈေး၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုထောကျပံ့ဖို့စီမံခန့်ခွဲမှု, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များကိုရှိတယ်ဆိုတာပြသလျက်ရှိသည်။
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 26.4513MHZ 12PF SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 54056 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 5.0000MHZ 20PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 175683 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 25.000 MHZ 18PF SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 212458 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 126829 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 3.579545MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 130878 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 127212 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 83936 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 53078 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OSC XO 14.7456MHZ HCMOS TTL PC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 154193 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 152952 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 18.0000MHZ 20PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 151583 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 6.0000MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 125913 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OSC XO 35.000MHZ TTL PC PIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 33951 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OSC XO 48.000MHZ TTL PC PIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 35973 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 11.5200MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 148114 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OSC XO 4.000MHZ HCMOS TTL PC PIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 33647 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 163347 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 144112 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 10.0000MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 163968 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OSC XO 66.666MHZ TTL PC PIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 40397 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 8.0000MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 127016 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 23.5122MHZ 12PF SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 60633 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OSC XO 40.000MHZ TTL PC PIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 41954 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 4.0960MHZ 20PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 152716 pcs
ဖေါ်ပြချက်: MONO XTAL 10.7MHZ 2P 1.5DB TH
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 14657 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 3.6864MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 149709 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 5.1850MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 175732 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 40527 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OSC XO 64.000MHZ TTL PC PIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 44284 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 3.579545MHZ SERIES SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 52968 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 132004 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 24.0000MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 124551 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 4.433618MHZ 20PF SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 51233 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 44851 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 2.0000MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 73838 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 25.2235MHZ 12PF SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 66336 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 4.9152MHZ SERIES T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 158593 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 32.0000MHZ SERIES SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 39439 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OSC TCXO 125.000MHZ 3.3V HCMOS S
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12303 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 96620 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 19.6608MHZ 20PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 155514 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 24.00014MHZ SERIES SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 39600 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 74419 pcs
ဖေါ်ပြချက်: OSC XO 20.000MHZ TTL PC PIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 40361 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF T/H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 222962 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 36992 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CRYSTAL 26.5971MHZ 12PF SMD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 52488 pcs